Winnerama Casino Online R300 Mahhala Ayikho Idiphozithi yebhonasi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-winnerama casino
Isibuyekezo se-Winnerama Casino
Isofthiwe:VIVO Gaming, Pragmatic Play, Betsoft
Usizo: 24/7, 24/7 Live Chat
Ibhonasi Lokukwamukela:R450 Ama-No Deposit Bonus
200% Ibhonasi Yomdlalo ne 30 Ama-Free Spins
I-Winnerama isanda kufika ngo-2021 embonini yamakhasino e-inthanethi uma uyiqhathanisa namanye amakhasino e-inthanethi. Yini eyinikeza abadlali ukuthi igqame? Ingabe abadlali baseNingizimu Afrika bangalindela izici ezikhethekile ezivela kule khasino? Ingabe kufanele ithenjwe?
Yonke le yimibuzo ecindezelayo yabadlali baseNingizimu Afrika esizoyiphendula ekubuyekezweni kwethu okujulile kwe-Winnerama Casino. Ake siqale ngeizici jikelele. I-Winnerama izwakala njengegama lokukhangisa lakudala elisukela ikhulu leminyaka elidlule. Kepha ikhasino ngokwayo isukela esikhathini samanje, nobuchwepheshe be-inthanethi obumangalisayo.
Iwebhusayithi isebenza njengekhasino ye-inthanethi esheshayo, enendikimba emnyama. Inikeza ikhasino umoya wesithunzi, imfihlakalo nobuhle. Umbhalo umhlophe, nezindinkimba ezibhulonzi / golide zifaka ukukhanya.
Ukubukeka eceleni, i-Winnerama inikeza indawo yokugembula enelayisense ekhishwe e-Curacao. Ikhasino iphathwa yi-Tangiers Casino Group, inkampane ebisebenza imakethe yekhasino ye-inthanethi ingxenye engcono yamashumi amabili eminyaka.
Kepha njengoba ikhasino ngokwayo ingekho ndala kakhulu, balangazelela kakhulu ukwamukela abadlali abasha. Futhi bahlela ukukwenza lokhu ngokunikeza amabhonasi ediphozithi engekho namaphakeji amahle okukwamukela, okuningi mayelana nalawo phambili. Kodwa kwanele ukusho – abantu abaphatha i-Winnerama bayazi ukuklama iphromoshini yokukwamukela ekhangayo.
Njengenkampane yomhlaba wonke, i-Winnerama iyatholakala ngezilimi ezahlukile– izilimi zibandakanya isiNgisi, isiJalimane nesiFulentshi. Iphinde isekele izimali ezifana nama-Euro, amaDola, amaDola ase-Australia, nezinye eziningi.
Umnyango wezemidlalo unamakhulu emidlalo ohamba phambili, evela kubadayisi abaziwayo abanjenge-Betsoft. Ngokuvikeleka kwe-inthanethi okuphezulu, iwebhusayithi ye-Winnerama ithembisa ukuphepha okuphelele kwemininingwane yakho namarekhodi ezezimali. Kanye nesitifiketi se-SSL, i-Winnerama iphethe uphawu lwabahlinzeki abakhulu abanjenge-McAfee, i-Norton, ne-PCI.
Sekuyisikhathi sokungena ngempela ezintweni ezenza i-Winnerama ibe yindlela enhle ikakhulukazi kubadlali baseNingizimu Afrika.
Abadlali baseNingizimu Afrika bangacabanga ngokukhetha i-Winnerama Casino ngoba ikhasino ivulekele ngokuphelele kule makethe. Nakuba ingamukeli abadlali abavela emazweni amaningi, njengamakhulu afana ne-US ne-United Kingdom, okufanayo akusebenzi eNingizimu Afrika.
Abadlali bangathatha futhi bavule amabhonasi amaningi lapha. Ibhonasi yediphozithi engekho iyodwa ingenza le khasino ikufanele ukuvakashelwa!
Kodwa mhlawumbe, isizathu esikhulu kunazo zonke kufanele kube yingxenye yebhange neyezinkokhelo. Ungakhokha futhi uthole imali ngamaRandi ngaphandle kwezingqinamba zokuguqula imali ibe amaDola noma amaPhawundi ku-inthanethi. Zonke izindlela zokufaka imali zilungele iNingizimu Afrika futhi, i-EcoPayz ithembisa ukukhipha imali ngokushesha ekhasino.
Ubuqotho be-Winnerama buqinile. Inelayisense yase-Curacao futhi iqhuba umkhumbi oqinile – akukho ukwephulwa kwemithetho. Abadlali bangakhetha kumathuluzi amaningi atholakalayo ukulawula ukugembula kwabo.
Abadlali futhi bangabheka phambili ekuzuzeni okukhulu kuma-jackpot akhula njalo. Akhona ambalwa atholakala esigabeni sama-slot emtapo wolwazi wekhasino. Lezi zinto, kanye nohlelo lokusekela oluphakeme, ikhasi le-FAQ, nokusekelwa okugcwele kwemidlalo yamaselula kwenza i-Winnerama ibe yikhasino eqinile yabadlali abakudala abavela eNingizimu Afrika.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Winnerama Casino
I-Winnerama Casino ayidlali uma kuziwa ePhakhejini Yokukwamukela – lesi yisipho esinzima kakhulu esivela kule khasino. Ibhonasi yokukwamukela ibukeka kanjena, isetshenziswa kumadiphozithi amaningi.
200% Ibonasi Yokukwamukela + Ama-spin Amahhala Angu-30 Kudiphozithi Yokuqala
Qala umdlalo e-Winnerama Casino ngebhonasi yediphozithi yakho yokuqala. Lena idiphozithi elinganayo eza nama-spin amahhala angeziwe
Ibhonasi yediphozithi ka-200% ibiza inani elingadluli u-R20,000
Inesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imalo sika 35x
Ayikho ibhonasi edingekayo ukuze uthathe le bhonasi – uyithola ngokuzenzakalela. Futhi uthola ama-spin amahhala angu-30 ukudlala i-Stampede slot
250% Ibhonasi Yediphozithi Yesibili
Ingxenye yesibili yebhonasi inengxenye eyodwa kuphela – ibhonasi elingana nediphozithi:
Le bhonasi ikunikeza imali engadluli u-R25000
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali azishintshi ku 35x
Ayikho ikhodi yebhonasi edingekayo
300% Ibhonasi Yediphozithi Yesithathu
Ukuqedela iphakethe lakho lokukwamukela, thatha ibhonasi elingana nediphozithi yokugcina ngediphozithi ethe xaxa:
Ngale bhonasi, uthola imali engadluli u-R30,000
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali azishintshi
Wonke amabhonasi omathathu atholakala izinsuku ezingu-7 kuphela
Ibhonasi Yokukwamukela Ye-Bitcoin
Le phromoshini ekhethekile inenhloso ecacile – ukukhuthaza ukusetshenziswa kwama-cryptocurreny njenge-Bitcoin. Ikhasino ithembisa ibhonasi elingana nediphozithi ka-400% kumadiphozithi amathathu okuqala. Le phromoshini itholakala kubadlali abasha nabadala ekhasino. Kungenzeka ukuthi uthathe ibhonasi yokukwamukela ejwayelekile bese ukhetha le bhonasi ukuthola izinzuzo ezithe xaxa.
Amakhodi Ediphozithi Engekho e-Winnerama Casino
Uma ungumdlali omusha waseNingizimu Afrika, i-Winnerama Casino inento ethile ekhethekile ekulindele ngo-2021. Ibhonasi yediphozithi emahhala ngokuphelele ye-chip yamahhala. Uthola ibhonasi yekheshia ka-R300 kule phromoshini emangazayo. Umkhawulo wemali ongayikhipha kulesi sivumelwano ngu-R1000.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Winnerama Casino
Iphakheji Yokukwamukela inkulu, kodwa iphela ngokushesha kakhulu, ngesonto noma ngaphezulu. Uma lowo mthetho usuphelile, ukhululekile ukuthola noma iyiphi ibhonasi yomdlali ejwayelekile etholakala e-Winnerama Casino. Futhi akhona amabhonasi ambalwa atholakalayo:
Amabhonasi Atholakala Nsuku Zonke
Ngosuku ngalunye lwesonto, unethuba lokukhetha kumabhonasi angu 4-7 ahlukile
Wonke abalwa ngokuya ngenani elidiphozithiwe
Amadiphozithi amakhulu athola amabhonasi amakhulu – aze afike ku R10,000
Lawa mabhonasi atholaka amahora angu-24 usuku ngalunye, UMsombuluko kuya kuSonto
Ukubuyiselwa Kwekheshi Okuqinisekile Kumadiphozithi Ngesonto
Esikhundleni sokubuyisela ukheshi kumali oyilahlile, i-Winnerama iyinikeza kuma diphozithi amaSonto
Ukheshi obuyiselwayo umiswe ku-15% wesamba samadiphozithi akho ngesonto
Imali idiphozithwa ku-akhawunti yakho ngoMsombuluko olandelayo
Ukuze bafaneleke ibhonasi, abadlali akumele ukuthi bacele ukukhipha imali ngalelo sonto
I-Winnerama Casino iqhuba imincintiswano ye-leaderboard eminingi yabadlali be-Slots
Kukhona okungakhethwa ama-VIP, abadlali abasha, nabadlali bekhasino abajwayelekile
Imiklomelo ibandakanya ama-spin amahhala, imali yangempela , futhi nezimpahla zikanokusho ezifana namawashi
Ikilabhu ye-VIP yase-Winnerama
Kunamazinga ayisithupha ekilabhu ye-VIP kule khasino
Bonke abadlali abasha baqala ezingeni eliphansi
Ungakhuphuka amazinga ngokuqoqa amaphoyinti e-VIP – bheja ukuwathola
Ama-VIP aphezulu azokwazi ukufinyelela izici eziningi.
Ukufinyelela imicimbi nemiqhudelwano ekhethekile
Imikhawulo ephezulu yokukhipha imali nokuningi
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Winnerama Casino
I-Winnerama Casino inenqubo elula yokubhalisa ku-inthanethi ongayiqedela emizuzwini embalwa. Sebenzisa i-PC noma idivayisi yeselula (i-iOS noma i-Android) ukwenza lokhu – wonke asebenza ngokufanayo!
Vakashela iwebhusayithi yekhasino ye-inthanethi ngokusebenzisa isiphequluli esifana ne-Chrome noma i-Safari
Thola inkinobho ewolintshi ethi “Joyina Manje” bese uyichofoza
Gwalisa ifomu elivelayo ngemininingwane elandelayo:
○ Igama lokusebenzisa kusayithi nephasiwedi ye-akhawunti entsha
○ Inombolo yocingo
○ Uhlobo lwemali okhetha ukudlala ngalo (khetha kuhlu)
Uma usuqede konke lokhu, bheka inkinobho eluhlaza ethi “Bhalisa” ngezansi
Kufanele ibe nesixhumanisi ngezansi semigomo nemibandela yekhasino
Funda imigomo ngaphambi kokuchofoza inkinobho ethi Bhalisa
Uma uchofoza inkinobho, kuzovulwa i-akhawunti entsha yekhasino
Ikhasino izothumela ikhodi yokuqinisekisa kunombolo yakho yeselula
Yisebenzise ukuqedela inqubo yokubhalisa
Ikhasino izokusa esigabeni samadiphozithi
Thatha ibhonasi entsha, noma yengeza imali yokudlala usebenzisa indlela yokukhokha oyithandayo
Imidlalo Yasekhasino Ongayidlala e-Winnerama Casino
I-Winnerama Casino ithola imidlalo nesofthiwe yayo kubadayisi abane abakhulu. I-Betsoft, i-Pragmatic Play, i-Vivo Gaming, ne-Octopus
Gaming. Kulaba abadayisi, umdayisi abadlali abaningi abazomlanda yi-Betsoft – inikela iningi lama-slot e-inthanethi nama-jackpot e-Winnerama Casino.
Mayelana nenani eliphelele lemidlalo, lisehlangothini elincane. Ngokulinganisela kwethu, i-Winnerama Casino inemidlalo engu-340, ehlukaniswe ngezigaba ezinhlanu ezinkulu. Lokho kusenele ukugcina umdlali ojwayelekile ejabulile izinyanga eziningi.
Futhi uma ubheka ukufika kwemidlalo emisha, okwenzeka kaningi emakhasino e-inthanethi, uhlu lwemidlalo lubukeka luningi ngokwanele e-Winnerama. Yonke imidlalo ihlelwe kahle ngokuhlukaniswa ngezigaba okwenza kube lula ukufinyelela kuyo nokuthi kube lula ukuzulazula.
Ama-slot Evidiyo Angaphezulu kwe-200
Le ngxenye ye-Winnerama Casino imayelana nama-slot esimanje ezinama-reel angu-5 kuya kwangu-7 nezici ezithuthukile. Hlola izingqikithi ezisuka ezilwaneni ziye emasikweni asendulo, opopayi, inganekwane, nokunye okuningi. Imidlalo ejabulisayo njenge-Total Overdrive, i-Wolf Gold, i-Viking Age, i-Rook’s Revenge ne-Cool Stone Age ilwelwa ukuthi uyinake. Lolu hlu lunama-jackpot acishe afike u-20, iningi lawo ngama-progressive (imali ekhula njalo), futhi inani lawo ephelele licishe lifike ku-R3 million.
Ama-Slot Akudala Amaningi
Mhlawumbe ulangazelela ukukhumbula isikhathi esidlule esiza nemishini yokugembula yakudala enezithelo? Uma kunjalo, lolu hlu lwase-Winnerama lukulungele. Lawa ma-3 reel slot alula eza nezithombe zesimanje nesipiliyoni sokudlala esivivinywe isikhathi. Zama imidlalo enjenge-Monkey Madness, i-Aztec Gems, i-Triple Jokers, ne-Irish Charms, ikhasino inemidlalo engaphezulu kwengu-45 ehlukile lapha.
Jabulela Imidlalo Yasekhasino Ebukhoma
Ingabe ufuna ukuzizwa sengathi empeleni udlala ngaphakathi kwekhasino yangempela esakhiweni? Imidlalo yabadayisi ababukhoma ingakunikeza leso spiliyoni ngamavidiyo abukhoma abo. Kubandakanya amakhadi angempela, amatafula angempela, nabadayisi abangabantu bangempela, le midlalo isakazwa bukhoma kusuka kuzitudiyo zezinkampani ezinjenge-Vivo Gaming. E-Winnerama, ungadlala izinhlobo eziyisithupha ze-roulette ne-blackjack bukhoma.
Okuthile Kwabalandeli be-Poker
Akukho okudlula ukudlala i-poker nomuntu ophilayo bese uyawina, kodwa into engcono elandelayo mhlawumbe ukudlala nekhompyutha bese uyinqoba. Isigaba se-Poker Yevidiyo kule khasino sinemidlalo eyehlukile engu-33, kubandakanya i-Deuces Wild, i-All American, i-Bonus Deuces, ne-Multihand Joker Poker.
Ingabe i-Winnerama Casino Itholakala Kuselula?
Yebo, iwebhusayithi ye-Winnerama Casino yakhelwe ukuhambisana ngo-100% ne-smartphone. Uma nje iselula yakho ine-iOS noma i-Android, ungavula kalula ikhasino. Ngezansi kunohlu lwezinto ezibalulekile ozidingayo ukuze lokhu kwenzeke:
Isiphequluli se-smartphone esifana ne-Chrome noma iSafari (esesekela i-HTML5)
Uhlale uku-inthanethi – nge 4g/WiFi
Ukubuyekeza izimo zokuphepha ngokudawuniloda kubakhiqizi (ukuphepha okuvamile)
Ungasebenzisa omabili amadivayisi e-iPhone namadivayisi e-Android ukudlala imidlalo yase-Winnerama Casino. Akunasidingo sokuthenga amaselula abizayo. Imidlalo ilula ngokwanele ukuthi isebenze kumaselula angabizi, kusuka ku-Moto, i-Samsung, ne-Huawei.
Ngingadawuniloda i-Winnerama Casino Kuselula Yami?
Cha, i-Winnerama Casino ayinayo i-app ngo-2020. Futhi akufanele ulindele ukuthi ikhasino ikhipha noma iyiphi i-app yokusebenzisa ngokuzayo. Ngesipiliyoni sokusebenzisa esihle esinikezwa ngamawebhusayithi e-HTML5, amakhasino e-inthanethi awasenaso isidingo sokwenza ama-app e-iOS ne-Android – kuyabiza ngokuhamba kwesikhathi. Ungasebenzisa isiphequluli sakho seselula ukuvula iwebhusayithi yekhasino futhi udlale ama-slot akho kuselula.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Winnerama Casino
Visa Credit Card Yebo Ngokushesha
Visa Electron Debit Card Yebo Ngokushesha
MasterCard Credit Card Yebo Ngokushesha
Maestro Debit Card Yebo Ngokushesha
EcoPayz Yebo Ngokushesha
Bitcoin Yebo Ngokushesha
Izindlela Zokudiphozitha Ezivunyelwe e-Winnerama Casino
Isungulwe: 2020 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Cha
Umphathi ngu: Tangiers Casino Group I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Curacao Ingxoxo Ebukhoma: Cha
Uhlobo Ongaludawuniloda Cha Usizo lwe-24/7 365: Yebo
Ubuhle Nobubi be-Winnerama Casino
Yini Eyenza Ukuthi i-Winnerama Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-Winnerama iyikhasino entsha sha yomhlaba wonke egxile kumakethe yaseNingizimu Afrika. Inezici ezinhle ezenza ithandwe ngbadlali baseNingizimu Afrika ngo-2021 –
Amabhonasi ediphozithi engekho Akhethekile nephakheji yokukwamukela
Izindlelo zokukhokhelwa ezinjenge-EcoPayz
Ithimba losizo lwamakhasimende elihle
Imidlalo eminingi ye-Betsoft yama-slot nama-jackpot
Izikhalo nge-Winnerama Casino Ningizimu Africa
I-Winnerama Casino isanda ukufika empeleni embonini yamakhasino e-inthanethi ngo-2020. Kuze kube manje, asikabhekani nezikhalo mayelana nale khasino. Nakuba kungenzeka ukuthi sikhipha isinqumo ngokushesha, izimpawu zokuqala zibonakala zizinhle kakhulu. I-Winnerama inakho konke ikhasino ethembekile enakho.
Iyini i-Winnerama Casino?
I-Winnerama yiwebhusayithi yekhasino ye-inthanethi esheshayo eyethulwe ngo-2018. Inakekela izidingo zabadlali bekhasino ye-inthanethi abavela emazweni amaningi emhlabeni jikelele, kubandakanya iNingizimu Afrika. Ikhasino ibiza isiqhingi sase-Caribbean i-Curacao ikhaya futhi inelayisense yokugembula esebenzayo evela kuleyo ndawo.
Ikhasino ingafinyelelwa nge-PC noma iselula ye-iOS noma eye-Android. Inamakhulu lama-slot evidiyo, ama-jackpot amaningi, imidlalo yamakhadi, ne-poker yevidiyo. Ikhasino ayitholakali kwezinye izimakethe ezinkulu njenge-US ne-U
Ngiyikhipha Kanjani imali kwi-Winnerama Casino
Uma unebhalansi esele ku-akhawunti yakho ye khasino, ungenza isicelo sokuhoxa. Khepha qiniseka ukuthi uhlangabezana nale mibandela. Elandelayo Kuqala:
Uhlinzeke ngawo wonke amakhophoni e-ID kanye nemibhalo njengoba iceliwe yikhasino ye-KYC
Awunawo ambhonasi asabenzayo anezidingo zokubheja ezingagcwaliswaga.
Uma ngabe le mibandela emibili ingahlanganezwa isicelo sakho singavinelwa, noma okubi naka khulu, ama winnies akho-angavalwa! Ngakho ke qapha ngokwenziwe! Uma usuqinisekile ukuthi yonke into iphephile futhi isilungile yenza lezi zinto:
Ngena ku-akhawunti yakho bese uya esigabeni senkokhelo/ sokubhanga/ sokukhipha imali.
Faka inani ofisa ukulithola ebhokisini olinikeziwe.
Qiniseka ukuthi kungaphakathi kwemingcele evunyelwe yokuhoxa
khetha indela yakho yoku khokha oyithandayo.
Ikhasino lizo qinisekisa yonke imininingwane bese lithumela imali kwi-akhawunti yakho
Yini eyenza iWinnerama casino indawo ephephile yokugembula?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani i-Winnerama iyiwebhusayithi yokugembula ephephile ngo 2021. Lezi zibandakanya:-
● Ikhasino isemthethweni – inelayisense esebenzayo evela ku-The Curacao Gambling Authority
● Umphathi uyaziwa futhi uyahlonishwa
Yonke imidlalo ivela kuzinkampani eziaziwayo ezinjenge-Betsoft ne-Pragmatic Play
Ikhasino ilandela imithetho ye-KYC – uphawu lwebhizinisi elisemthethweni
Iwebhusayithi ine-SSL, i-Norton, i-PCI, kanye nesitifiketi sokuphepha se-McAfee
I-Winnerama Casino ithikha wonke amabhokisi afanele asohlwini lwekhasino ye-inthanethi. Yingakho siyibheka njengendawo enhle yokusebenzisa isikhathi nemali yakho.
Ngikakwazi yini ukubheja ezemidlalo e-Winnerama Casino
Cha, i-Winnerama casino inayo enye i-sportbook enamathiselwe kuyo. Le webhusayithi imayelana nokudlala ekhasino ye-inthanethi – ama-slot, i-poker, i-blackjack, i-roulette, neminye imidlalo yamakhadi. Ungahle ukwazi ukuthola ama-slot anezindikimba zemidlalo noma kunjalo, njengenduduzo eithile.
Ngubani ophethe i-Winnerama Casino
I-Winnerama Casino iphethwe yiqembu elibizwa nge-Tangiers Casino Group. Abanikazi banesipiliyoni seminyaka engaphezu kwamashumi amabili besebenza ngamakhasino e-inthanethi.
Ngabe i-Winnerama Casino isemthethweni e-Ningizimu Afrika?
Amakhasino e-Inthanethi ase-Ningizimu Afrika awekho emthethweni okwamanje. Kodwa lomthetho awuphoqelelwa kuma kahsino avela ngaphandle kwezwe njenhe-Winnerama ngokwesibonelo. Imithetho yamanje e-Ngizimu Afrika ayikuvumi ukuthi Amakhasino e-Inthanethi akuleli asenze imakethe. Uhulumeni uvame ukushiya amakhasino anjalo wodwa, Njengoba kuyinqubo eyinkimbinkimbi ukuwathathela izinyathelo zomthetho. Futhi awazami ukuheha izakhamuzi zase-Ningizimu Afrika ukuba zidale kuwo. Kuphephile ngokomthetho ukudlala e-Winnerama Casino eNingizmu Afrika.